SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Myanmar Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Ndakadzidza Bhaibheri ndichishandisa mabhuku eBraille. Kunyange zvazvo ndainzwisisa zvandaidzidza, nechemukati pane zvakanga zvakandiomera kubvuma. Somuenzaniso, zvakanga zvakandiomera kubvuma kuti Mwari ane hanya neni uye kuti vamwe vanhu vaigona kundiona sezvandinoitwa naMwari. Ndainzwisisa chikonzero nei Jehovha achibvumira kutambura panguva ino, asi zvaindiomera kuti ndimuone saBaba vane rudo. *
^ ndima 13 Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pekuti nei Mwari achibvumira kutambura, ona chitsauko 11 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.